Baarlamanka Somaliland oo biyaha laga jartay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Somaliland oo biyaha laga jartay
Mareeg.com: Wakaaladda Biyaha Hargeysa ayaa xarrunta golaha Baarlamanaka Somaliland ka jartay biyihii ay ka isticmaali jireen qasabada ee ugu jirtay labada aqal ee Wakiiladda iyo Guurtidda.
Xoghayaha guud ee Golaha Wakiiladda maamulka Somaliland, C/risaaq Siciid Aayaanle ayaa sheegay in aanay garanayn sababta ay wakaaladdu ugua jartay biyaha, waxaanu sheegay in aanay wax lacag ah ku lahayn ee ay si joogta ah bil walba uga qaataan Bill-kooda.
Xoghaye C/risaaq Siciid Ayaanle waxa uu sheegay in ay u arkaan Gef in Xarunta Baarlamaanka laga jaro biyaha iyadoon wax lacag ah lagu lahayn, isla markaana lagu jiro Bil cibaado oo ay u baahan yihiin xildhibaanada iyo shaqaalaha Goluhu biyo ay u isticmaalaan Weysada.
C/risaaq Siciid Aayaanle waxa uu sheegay wakaaladda Biyaha inaanay wax gawshiiyo ah ka siini biyaha ay Xarunta Baarlamaanka ka jareen, isagoo ku dooday in biyuhu uga socdaan xafiisyada kale ee la jaarka ah si caadi ah, gaar ahaan Madaxtooyadda oo ay iska soo horjeedaan.
Xoghaye C/risaaq Siciid waxa uu wakaaladda ku eedeeyey inay biyaha ka jartay muddo ku siman bishan Ramadaan oo dhan oo aanay wax biyo ah arag, isagoo ku dooday masuuliyiinta wakaaladdu inaanay illaa hada jawaab ka siinin xafiiskiisa oo u qaabilsan Golaha arrimaha Maamulka sababta ay u heli waayeen biyo.
Magaalada Hargeysa ayaa laga dareemayaa biyo la’aan xad dhaaf ah maadaama la galay xilli kulayle ah oo ay Dadweynuhu isticaamalayaan biyo ka badan intii ay hore u isticmaali jireen.
Booliska Boondheere oo qabtay nin lagu eedeeyey Shabaabnimo